Ukuthengwa Kwama-ejenti, I-ejensi Yokuthumela, Isevisi eqondene nomuntu - i-Yunis
Sine umphakeli wesikhathi eside futhi ozinzile wezinkulungwane zezimboni namashumi ezinkulungwane zezitolo ukuqinisekisa ukulethwa okufika ngesikhathi nangekhwalithi kwezimpahla zakho ezikhethiwe.
Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 ebhizinisini, sakhe ubuhlobo obuseduze nabathengisi abahle kakhulu e-china .Singakunika amanani entengo ancintisana kakhulu emakethe, ngekhwalithi enhle kakhulu.
Sizokunikeza insiza ekhethekile eyenziwe umuntu, nomuntu ngamunye evumelana nezidingo zakho futhi uthole umkhiqizo ohlangabezana nezidingo zakho futhi osebenza ngempumelelo.
Uma ufuna i-ejenti esebenzayo yokufeza ibhizinisi lakho elisha futhi yakhe isikhala esisha sokukhula somkhiqizo wakho, sizokwenza ngokwezifiso isixazululo esikufanela kangcono.
Singenza okungaphezu kokucabanga kwakho, awusoze wazisola ngokukhetha kwakho
UJobber Ukhipha Umbiko Ocacisa Okwamanje ...
I-TORONTO- (IBHIZINISI LEZIMALI) - UJobber, umhlinzeki ophambili we-software yokuphatha izinsiza zasekhaya, umemezele okutholakele embikweni wakamuva obheke kakhulu emthelela wezomnotho we-COVID-19 esigabeni seNkonzo yasekhaya. Utili ...
Ithokomele ukuhweba kulobu busika
Akukho lutho olufana nokugoqoza eduze komlilo obhangayo oqoqwe ngejazi elifudumele, izingubo zokulala ezithambile nemicamelo ye-furry ngosuku olubandayo. Njengoba sibuthana ndawonye isikhathi esele sonyaka wasebusika, singabonga kakhulu emhlabeni jikelele ...
Ucwaningo Lwezimakethe Zomhlaba Lomhlaba 2020 kuya ...
Umbiko Wezimakethe Zezimali Zomnotho Lomhlaba uhlinzeka ngokuhlaziywa okuphelele nokuqonda komncintiswano, ukuhlukaniswa kwezingxenye, ukuthuthukiswa kwezindawo, kanye nokuthuthuka kwendawo ngemboni yezimboni yesikhathi esizayo ukufika ngo-2026. Ucwaningo lukhona ...
I-Yunis International Trade (HK) Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2011. Yinkampani enamalungelo okuthenga nokuthengisa emazweni angaphandle evunyelwe yi-State Administration of Foreign Trade and Cooperation ye-Economic and General Administration of Customs. Inkampani inesisekelo sezomnotho esiqinile, inethiwekhi eqinile yobudlelwano, kanye nabasebenzi abaphelele. Ngokungena kweChina kwi-WTO, ukuhweba okuthekelisa kanye nokuthekelisa kuyakhula. Ukuze uqhubeke uhlangabezana nezidingo zabathengisi nabangenisi nabathengisi ngaphandle…